Fahasalamana: ny pôrnôgrafia dia famporisihana mahery vaika | Reward Foundation
Home fahasalamana Fandresen-dahatra an-tsokosoko
Ity fizarana ity dia mifototra amin'ny nalaina avy amin'ny bokin'i Gary Wilson Ny atidohanao amin'ny pôrnôgrafia, pôrnôgrafia amin'ny Internet ary ny siansa miseho amin'ny fiankinan-doha nahazoana alalana avy amin'ny Mpanoratra.
Inona no atao hoe stimulus supernormal?
Ny teny, sary ary horonan-tsary erotic dia efa ela - toy ny fihazakazaky ny neurochemical avy amin'ny mpivady vao. Ka inona no mahatonga ny pôrnôgrafia ankehitriny mandresy lahatra manokana? Tsy ny zava-baovao fotsiny. Dopamine dia mirehitra amin'ny fihetsem-po sy ny fanentanana hafa koa, izay matetika misongadina indrindra amin'ny pôrnôn'ny Internet:
• Fahatairana, fahatairana (Inona no tsy manaitra amin'ny pôrnôgrafia ankehitriny?)
• Ahiahy (Mampiasa sary vetaveta izay tsy mifanaraka amin'ny soatoavinao na ny firaisana ara-nofo)
• Mitady sy mikaroka (Maniry, miandry mialoha)
Raha ny tena izy, ny pôrnôgrafia amin'ny Internet dia mitovy be amin'ilay antsoin'ny mpahay siansa ho fanentanana tsy ampoizina. Taona maro lasa izay, Nikolaas Tinbergen, nahazo loka Nobel, dia nahita fa ny vorona, lolo ary biby hafa dia azo oharina amin'ny atody sy vady sandoka. Ny vorona vehivavy, ohatra, dia sahirana nipetraka teo amin'ilay atody plastera lehibe kokoa noho ny fiainana an'i Tinbergen, ary maty kosa ireo atody mavo sy somotraviavy. Ny voangory firavaka lahy dia tsy hiraharaha ny tena vady noho ny fiezahana tsy misy fotony hanahaka ny tavoahangy labiera misy tavoahangy mena. Ho an'ny voangory, tavoahangy labiera mitsivalana amin'ny tany no toa vehivavy lehibe indrindra, tsara tarehy, ary tia firaisana indrindra efa hitany.
Raha lazaina amin'ny teny hafa, fa tsy ny valiny voajanahary mijanona amin'ny 'toerana mamy' izay tsy fitarihany ny biby hivoaka ny lalao fampakaram-bady tanteraka, ity fandaharana voajanahary ity dia mitohy miteraka valinteny mafanafana amin'ireo fanentanana tsy azo tanterahina.
Tinbergen dia niantso ny fitaka toy izany hoe 'fanentanana supranormal', na dia antsoina matetika hoe 'fanentanana supernormal' aza izy ireo ankehitriny.
Ny fanentanana supernormal dia dikan-teny mampihetsi-po amin'ny fanentanana ara-dalàna izay hitantsika fa sarobidy. Mahaliana fa na dia tsy azo inoana aza fa ny rajako dia misafidy sary mihoatra ny tena vady, ny gidro dia 'handoa' (valisoa ranom-panafody) hijerena ny sarin'ny vehivavy ambany gidro. Angamba tsy dia mahagaga loatra raha ny pôrnôgrafia ankehitriny dia mety hanilika ny saintsika.
Ahoana ny antony mahatonga ny vetaveta amin'ny Internet ho fanentanana amin'ny fomba tsy mahazatra?
Rehefa manao stimulus supernormal artifisialy isika no laharam-pahamehantsika indrindra satria io dia niteraka fipoahana dopamine lehibe kokoa tao amin'ny faribolan'ny valin'ny ati-dohantsika noho ny mpiara-miasa aminy voajanahary. Ho an'ny ankamaroan'ny mpampiasa dia tsy afaka mifaninana amin'ny tena mpiara-miasa ny sary vetaveta taloha. Ny centrefold Playboy dia tsy nanao kopia ireo mari-pamantarana hafa taloha, ireo mpampiasa pôrnôgrafia dia nianatra nifanerasera tamina tena pototra na tena mpiara-miasa: maso, fikitika, hanitra, fientanam-po amin'ny filalaovana sy dihy, foreplay, firaisana ara-nofo sns.
Ny pôrnôn'ny Internet ankehitriny kosa dia mirongatra amin'ny fanentanana tsy ampoizina. Voalohany, manolotra hotties vaovao tsy misy farany azo tsindrio iray amin'ny tsindry iray. Ny fikarohana dia manamafy fa ny fiandrasana valisoa sy ny zava-baovao dia mifampahery mba hampitombo ny fientanentanana sy hamerenana ny lalan'ny valin'ny ati-doha.
Faharoa, ny pôrnôn'ny Internet dia manome tratra nohomboina tsy voatanisa ary Viagra no nanohana ny penina gargantuan, fitomboan'ny filan'ny faniriana, fanamafisana ny familiana pilotra, fidirana an-tsokosoko na intelo, andian-jiolahim-boto ary ireo tranga tsy azo tanterahina hafa.
Fahatelo, ho an'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny sary mihetsiketsika dia tsy afaka ampitahaina amin'ireo horonantsary 3-minitra famaritana momba ny filan'ny nofo ankehitriny. Miaraka amina bunnies mitanjaka rehetra anananao dia ny eritreritrao manokana. Fantatrao foana izay hitranga manaraka, izay tsy dia nisy loatra tamin'ny tranga talohan'ny internet 13 taona. Mifanohitra amin'izany kosa, miaraka amina horonantsary 'Tsy azoko inoana izay vao hitako' tsy misy farany, voahitsakitsaka tsy an-kijanona ny zavatra antenainao (izay hitan'ny atidoha manentana kokoa). Ataovy ao an-tsaina ihany koa, fa ny olombelona dia nivoatra nianatra tamin'ny alàlan'ny fijerena ny hafa manao zavatra, noho izany ny video dia matanjaka kokoa amin'ny 'fomba fanaovana' lesona noho ny mbola.
Miaraka amin'ny hafahafa amin'ny siansa-fiction izay mety nahatonga an'i Tinbergen hiteny hoe: 'nolazaiko anao izany', matetika ireo mpampiasa pôrnôgrafia ankehitriny dia mahita fa ny erotika amin'ny Internet dia manentana kokoa noho ny tena mpiara-miasa. Mety tsy te handany fotoana be eo imason'ny solosaina ireo mpampiasa mibanjina pôrnôgrafia ary manindry sary vaovao. Mety aleon'izy ireo mandany fotoana mifanerasera amin'ny namana ary hihaona amin'ireo mety ho mpiara-miombon'antoka amin'izany.
Saingy ny zava-misy dia mitolona amin'ny fifaninanana eo amin'ny haavon'ny valin'ny ati-doha, indrindra rehefa manipy ny fifandanjana ny tsy fahatokisana sy ny fivadihan'ny fifandraisana ara-tsosialy. Araka ny filazan'i Noa Church azy ao amin'ny memoir-ny Wack: Nalefa tamin'ny Internet Porn, 'Tsy hoe tsy te hanao firaisana ara-nofo marina aho, fa vao maika sarotra kokoa sy mahasadaikatra kokoa noho ny sary vetaveta.' Ary ity dia mahita akony amin'ny kaonty voalohany:
"Nandalo fotoana naha mpitovo aho, tafahitsoka tao amin'ny tanàna kely misy toerana vitsy isan'ny mampiaraka, ary nanomboka nivezivezy matetika tamin'ny pôrnôgrafia. Gaga aho fa haingana ny nifoka ahy. Nanomboka very asa nandritra ny andro maromaro aho tamin'ny fitetezana tranonkala vetaveta. Ary na izany aza tsy dia nankasitrahako tanteraka ny zava-nitranga tamiko mandra-pahatongako teo am-pandriana niaraka tamina vehivavy iray ary nahasarika ahy nitady sary an-tsaina sary vetaveta nahafinaritra mba hahazoana sarotra. Tsy noheveriko fa mety hitranga amiko izany. Soa ihany fa nanana fototra lava amin'ny firaisana ara-nofo salama aho talohan'ny pôrnôgrafia ary fantatro izay mitranga. Rehefa avy nijanona aho dia nanomboka nandry indray, ary matetika. Ary nifanena tamin'ny vadiko aho taoriana kelin'izay. ”
Ahoana ny fitrandrahana ny indostrian'ny pôrnôgrafia fanentanana supernormal
Androany, tsy misy farany ny fanentanana supernormal eo imasony. Ny indostrian'ny pôrnôgrafia dia efa manolotra pôrnôgrafia 3-D sy robot ary kilalao fanaovana firaisana ara-nofo ampiarahina amin'ny pôrnôgrafia na mpampiasa solosaina hafa hanahafana ny hetsika ara-batana. Saingy misy loza mitatao rehefa misy zavatra:
• misoratra anarana ho 'sarobidy indrindra', izany hoe, dikan-teny mihoapampana momba ny zavatra iray izay novolavolain'ny razambentsika (mba hahitana tsy azo tohaina (sakafo be kaloria, fanentanana ara-nofo),
• azo alaina mora amin'ny famatsiana tsy misy fetra (tsy hita voajanahary),
• misy karazany maro (zava-baovao),
• ary ampiasaintsika loatra amin'ny laoniny ilay izy.
Sakafo junk mora sy be dia be no mifanaraka amin'ity maodely ity ary eken'ny rehetra ho fanentanana tsy ampoizina. Azonao atao ny mamono zava-pisotro malefaka 32-ons sy kitapo misy nibble masira tsy dia misy eritreritra firy, fa manandrama fotsiny handany ny kaloria mitovy aminy amin'ny hazandrano maina sy ny fakany nandrahoina!
Toy izany koa, ireo mpijery matetika mandany fotoana amin'ny fivezivezena galeriana amin'ny pôrnôgrafia mitady ny horonan-tsary mety ho vita, mitazona ny dopamine ho lava mandritra ny fotoana lava be. Fa andramo alao sary an-tsaina ny mpihaza mpihaza mandany matetika ny ora mitovy amin'ny filatsahana amin'ny sary-kazo iray ihany amin'ny rindrin'ny zohy. Tsy nisy izany.
Ny pôrnôgrafia dia miteraka risika tokana mihoatra ny fanentanana amin'ny fomba mahazatra. Voalohany, mora ny miditra, misy 24/7, maimaimpoana ary tsy miankina. Faharoa, ny ankamaroan'ny mpampiasa dia manomboka mijery pôrnôgrafia amin'ny fahamaotiana, rehefa eo an-tampon'ny plastika ny ati-dohany ary marefo indrindra amin'ny fiankinan-doha sy ny famerenana amin'ny laoniny. Ary farany, misy fetrany ny fanjifàna sakafo: ny fahaizan'ny vavony sy ny fanilikilihana voajanahary izay miseho rehefa tsy afaka miatrika zavatra iray hafa isika.
Mifanohitra amin'izany, tsy misy fetra ara-batana amin'ny fanjifana sary vetaveta amin'ny Internet, hafa noho ny filan'ny torimaso sy ny fandroana trano fandroana. Ny mpampiasa iray dia afaka mitifitra (mihetsiketsika tsy misy climaxing) amin'ny pôrnôgrafia mandritra ny ora maro nefa tsy miteraka fahatsapana fahafaham-po, na fanilikilihana.
Ny fijerena sary vetaveta dia toy ny fampanantenan'ny fahafinaretana, saingy tadidio fa ny hafatry ny dopamine dia tsy 'fahafaham-po'. 'Mandrosoa hatrany, efa akaiky ny fahafaham-po':
"Nanaitra ny tenako teo akaikin'ny orgasme aho avy eo, nijanona, nijery sary vetaveta foana, ary nijanona teo amin'ny ambaratonga antonony foana. Niahiahy kokoa ny hijery pôrnôgrafia aho fa tsy handeha amin'ny orgasme. Ny pôrnôgrafia dia nanidy ahy hifantoka mandra-pahatongan'ny reraka sy ny orgasme fotsiny noho ny fitolo-batana.
<< Adin-tsaina Fiankinan-doha >>